Apple Inoburitsa Yechipiri Beta yewatchOS 7.3 yeVagadziri | Ndinobva mac
Apple inoburitsa yechipiri beta yewatchOS 7.3 yevagadziri
Kupfuura rinopfuura mwedzi mushure meApple yaburitsa watchOS 7.2 yaisanganisira Apple Fitness +, itsva ECG inogadziridza, uye zvimwe zvishoma zvinoshamisa. iyo beta yechipiri yakatangwa chei chichava watchOS 7.3. Apple yakaburitsa iyi beta inoitirwa vagadziri.
Apple ichangobva kuburitsa ndeipi yechipiri beta yewatchOS 7.3 yevagadziri kuitira kuti ukwanise kuyedza matsva inclusions mune ino inoshanda system. Zvishoma nezvishoma vashanduri vari kuyedza mashandiro matsva uye vachipa maonero avo kuApple kuti igadzirise uye iwedzere zvido zvinomuka.
Mwedzi mumwe mushure mekutanga kweiyo betas yeiyi yechitatu edition yewaytchOS 7, Apple inoda kuenda kumberi uye inobvunza vanogadzira kuti vatore iyi yechipiri beta kungave kuburikidza neanodzora nzvimbo kana kubva iyo webhusaiti yevanogadzira , que Apple ine yakanangana nazvo.
Rangarira kuti kuti iyo nyowani vhezheni iiswe, iyo Apple Watch inofanira kuve nayo kanenge 50% bhatiri, kuve pane charger uye mukati meiyo iPhone.
Zvakaonekwa kuti mushanduro iyi nyowani pane tag inonzi "Nguva yekufamba" iyo inoratidza kuti Apple inogona kunge iri kuronga kuwedzera Kutungamirwa Kufamba Kwekushanda mune ino 7.3 kuburitswa.
“Nguva Yokufamba Kushanda inotorwa pasi apo Apple Watch yakabatana nemagetsi uye padyo neIPhone. Kushanda kwakapedzwa zvinodzimwa". Haisati yashanda, inogona kunge iri yechitatu beta.
Hazvizivikanwe kana paine imwe nhau. Asi isu tichava nekutarisisa kune izvo zvinowanikwa, kana paine chimwe chinhu uye isu tichakuudza nezvazvo.
Nenzira, sezvatinogara tichipa zano mubheas ndizvozvo akaiswa pamakomputa echipiri kwete iwo makuru. Kunyangwe hazvo dzakadzikama, dzichiri betas uye izvo zvinogona kutungamira kune zviputi zvinoita kuti Apple Watch isashande.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Apple inoburitsa yechipiri beta yewatchOS 7.3 yevagadziri
Intel CEO Bob Swan anozivisa kubva kwake kukambani
Apple inotangisa yechipiri macOS Big Sur 11.2 yekuvandudza beta